बाराको सिम्रौनगढमा भेटियो भगवान विष्णुको मूर्ति ! ॐ लेखेर दर्शन स्वरूप एक-एक सेयर गरौ …. – Nepali Janata Khabar
वीरगञ्ज – बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका–४ हरिहरपुरमा विष्णु भगवानको ठूलो मूर्ति फेला परेको छ । ६ फिट लामो र ४ फिट चौडाइ भएको मूर्ति फेला परेको हो ।
स्थानीय कुसुन्दरप्रसाद महतोले माछा पालनका लागि खेतमा पोखरी खन्ने क्रममा मूर्ति फेला परेको थियो । डोजर लगाएर ७ फिट गहिरो खाडल खन्दा विष्णु भगवानको मूर्ति फेला परेको वडा अध्यक्ष राजेश यादवले जानकारी दिए ।
उनले ऐतिहासिक सिम्रौनगढलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकासका लागि थप बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । ऐतिहासिक विष्णु भगवानको मूर्ति भेटिएपछि सिम्रौनगढको पर्यटकीय र पुरातात्विक महत्व अझ बढी रहेको पुष्टि भएको छ ।
तर यसको संरक्षणका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारले जति ध्यान दिनुपर्ने हो, त्यति दिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान पुग्नुपर्छ। मूर्ति १३ औं शताब्दीतिरकै हुन सक्ने अनुमान वडा अध्यक्ष यादवले गरेका छन् ।
मूर्ति सिम्रौनगढ क्षेत्रमा फेला परेको आजसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मूर्ति रहेको सिम्रौनगढ क्षेत्रका बासिन्दाले दावी गरेका छन् । डोजरले खन्ने क्रममा मूर्ति कतै कतै टुटफुट पनि भएको छ । शनिबार दिउँसो करिब तीन बजे फेला परेको मूर्ति हेर्न आसपास गाउँका बासिन्दाको घुइँचो g} लागेको छ ।
आइतबार बिहान प्रदेश नं २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले मूर्तिको दर्शन गर्नुको साथै उचित व्यवस्थानपन कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा स्थानीयसँग छलफल समेत गरेका छन् । मूर्तिको सुरक्षाका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय सिम्रौनगढमा राखिएको छ ।
तर मूर्तिलाई कमलेश्वरनाथ महादेव मन्दिरको प्राङ्गणमा राख्नेबारे छलफल भइरहेको वडा अध्यक्ष यादवले जानकारी दिए ।